Politika famerenam-bola | WOWOW Faucets-WOWOW Faucets
Home / Refund politika
Manana politika fiverenana 30 andro izahay, midika izany fa manana 30 andro aorian'ny nahazoanao ny entanao hangataka fiverenana ianao.
Raha te-hahazo fiverenana ianao, ny entanao dia tsy maintsy mitovy amin'ny fepetra noraisinao tamina azy, tsy voahaingo na tsy nampiasaina, niaraka tamin'ny tagy, ary tao anaty fonosiny tany am-boalohany. Mila ny tapakila na porofon'ny fividianana koa ianao.
Hanombohana fiverenana dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny service@wowowfaucet.com. Raha ekena ny fiverenanao dia handefa label fandefasana entana izahay, ary koa torolàlana momba ny fomba sy ny toerana handefasana ny fonosanao. Ireo entana nalefa tany aminay nefa tsy nangataka fiverenana aloha dia tsy ho ekena.
Afaka mifandray aminay foana ianao raha misy fanontaniana miverina ao amin'ny service@wowowfaucet.com.
Fahasimbana sy olana
Azafady mba diniho ny kaontinao rehefa mandray ianao ary mifandraisa aminay avy hatrany raha simba ilay entana, simba na raha mahazo zavatra tsy mety ianao, mba hahafahanay manombana ny olana ary manamboatra azy tsara.
Tsy misy na tsy azo averina
Ny karazan'entana sasany dia tsy azo averina, toy ny entana mora simba (toy ny sakafo, voninkazo na zavamaniry), vokatra namboarina (toy ny baiko manokana na entana manokana), ary kojakoja manokana (toy ny vokatra hatsarana). Tsy ekenay ihany koa ny fiverenana amin'ny fitaovana mampidi-doza, ranon-javatra mirehitra, na etona. Azafady mifandraisa raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny entana manokanao ianao.
Mampalahelo fa tsy afaka mandray ny valiny amin'ny entana amidy na karatra fanomezana izahay.
Ny fomba haingana indrindra hiantohana ny hahazoanao ilay hevitrao dia ny famerenanao ilay entana anananao ary rehefa ekena ny fiverenana dia manaova fividianana manokana amin'ny singa vaovao.
Izahay dia hampahafantatra anao rehefa nahazo sy nandinika ny fiverenanao izahay, ary ampahafantaro anay raha nekena ny vola na tsia. Raha ankatoavina, dia haverina am-panavaozana ny fomba nandoavanao ny vola ianao. Aza adino raha afaka mandany fotoana kely ny orinasan'ny bankinao na ny carte de crédit anao.
Raha ny fiverenan'ny mpanjifa, ny mpanjifa dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny saram-pandefasana. Ny saram-bola manokana dia tokony hiorina amin'ny orinasam-pifandraisana nofidinao.
Raha noho ny antony, ny entana voaray dia simba na tsy mahitsy, ary ny mpanjifa dia tsy takiana hitondra ny saram-pitaterana noho io antony io.
Tsy misy haba aloa amin'ny mpanjifa amin'ny famerenan'ny vokatra.
MIFANDRAISA AMINAY ADD: 8 THE GREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA TEL: 3322585000 E-mail: sales@wowowfaucet.com